Lehilahy sy vehivavy hendry
Azon'ny olona tsara ankehitriny ny hevitry ny hoe: Miasa ao anatintsika Izy sekoly, fianarana, ary fanabeazana. Tsy fahita ao amin'ny Fil. 2:13. Baiboly anefa ireo teny ireo. Ny teny hoe "fahendrena" na "hendry" no hita ao matetika kokoa. Ny ohatra dia milaza ny amin'ny lehilahy sy vehivahy hendry (2 Sam. 14:2, Ohab. 16:23).
Vakio ny 1 Mpanj. 5: 9-14. Inona no ampianarin'io andininy io amintsika momba ny maha-zava-dehibe ny fahendrena?
Nosinganina manokana ho toy ny olona manam-pahendrena tokoa i Sôlômôna mpanjaka, izay niresaka momba ny fiainan'ny biby sy ny zava-maniry, ary nanao ohabolana maro feno fahendrena lalina, dia tahaka ny olona izay nahazo fanabeazana ambony (1 Mpanj. 5: 9-14). Mirakitra fampianarana feno fahendrena maro mamba ny lohahevitra isan-karazany ny bokininy Ohabolana sy ny Mpitoriteny, izay nosoratan'i Sôlômôna sy ireo mpanabe hafa manam-pahendrena koa tamin'izany andro izany (Ohab. 1:1; 25:1; 30:1; 31:1).
Araka ny Baiboly, ny fahendrena dia misy ifandraisany betsaka amin'ny fanabeazana ankehitriny. Ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra no mampita izany amin'ny olona, indrindra amin'ny andro fahatanorany (Mpitt. 12:1), kanefa raha ny marina dia mianatra mandrakariva ny amin'ny fahendrena ny olona iray mandritra ny androm-piainany. Manaraka izany, ankapobeny ny fahendrena dia miaraka amin'ny fampiharana izany eo amin'ny fiainana. Ohatra: mianara amin'ny vitsika izay mamory ny haniny rehefa fahavaratra mba hananany ny ampy rehefa tonga ny ririnina (Ohab. 6:6-8).
Tsy hoe azo ampiharina amin'ny fiainana andavanandro ihany ny fahendrena, fa misy heviny ara-panahy koa izany. Manomboka amin'ny finoana an'Andriamanitra mantsy izany ary manaraka fitsipika fototra voafaritra tsara (Ohab. 1:7). Manampy antsika hahay handray andraikitra eo amin'ny fiainana ny fahendrena, ary koa hanasoa ny hafa sady miaro antsika tsy ho azom-pahoriana. Farany, tsy misy hafa amin'ny fanabeazana ankehitriny ihany, ny fahendrena koa dia tsy mamaly izay fanontaniana rehetra mety apetratsika, fa mahatonga antsika hifaly kosa amin'izay efa fantatsika sy hanohy hikaroka mikasika izay tsy mbola haintsika. Ary eo no toerana mety indrindra ahafahantsika mianatra ny hahalala an'Andriamanitra sy hitoky amin'ny fahasoavany. Ao amin'ny Jer.18:18, ny andraikitry ny mpanabe hendry dia raisina ho mitovy lenta amin'ny andraikitry ny mpisorona sy ny mpaminany. Samy mampita hafatra avy amin'Andriamanitra ho amin'ny olony avokoa ireo telo ireo, amin'ny alalan'ny fampianarana ny lalàna, ny torohevitra mamba ny fanabeazana, ary ny hafatra manokana avy amin'Andriamanitra.
Ahoana no hananantsika fahendrena ary avy eo mampita izany amin'ireo taranatsika?